Ratelọọrụ ịde blọgụ: The Rap Song | Martech Zone
Anyị hụrụ SeanieMic n'anya, onye na-edekọ ụda egwu nke na-eme ọtụtụ mkpọ egwu. Egwu ya mere ka ọ bụrụ nke ịkpa oke na weebụ, yabụ anyị gwara ya ka ọ gbụọ ya ụtọ maka akwụkwọ anyị, Gingde blọgụ maka Dummies. Seanie kpọgidere ya!
N’enyeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị naanị akwụkwọ nke aka ya, anyị zụlitere biya ma ụbọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị nwere ọmarịcha akwụkwọ! Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-ahụ nke a n'anya… ọ bụrụ na ịgụbeghị akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-achọ ịgbapụ ma zụta otu!
Nke a bụ Bloglọ ọrụ ịde blọgụ maka Dummies, Okwu Ugwu:
Bloggin 'Maka Dummies site na SeanieMic
Anyị ga-arụ ọrụ na vidiyo na mbido 2011. Daalụ Sean!
Tags: Omuma ahiaelekọta mmadụ media mere ziri ezielekọta mmadụ media na rechttoushennetoushenne.de
Na-achọpụta Blue Yeti